नेकपा विभाजनमा लालबाबु पण्डित तटस्थ, भन्छन्– पदको लडाइँमा फुट्दा लाज मान्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)
नेकपा विभाजनपछि दुवै पक्षले दिनहुँजसो भेला, बैठक र सभा गरिरहेका छन् ।
पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित ती कुनै पनि कार्यक्रममा देखिँदैनन् । तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका धेरैले उनलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता ठान्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषषद्‍मा उनी सुरुदेखि नै मन्त्री थिए । तर, फरक गुटकाे भएकै कारण पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट हटाएको भन्दै नेपाल समूहले विरोधसमेत गरेको थियो ।
तर, अहिले पार्टी विभाजन वैचारिकभन्दा नेताहरूको पदीय लडाइँ भएकाले आफू तटस्थ बसेर पार्टी एकतका लागि कोसिस गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, पूर्वमन्त्री पण्डितसँग शिलापत्रकर्मी जनक नेपालले लिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता :
नेकपा विभाजनमा तपाईं कता ?
म दुवैतिर लागेको छैन । यो पार्टीका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ता एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने बेला हो । कसले के पाउने भनेर पदका लागि लडाइँ गर्ने बेला होइन ।
पार्टी त विभाजन नै भइसक्यो । अब यस्ता कुराको अर्थ रहन्छ र ?
बहुमतको सरकार पाँच वर्षै चल्नुपर्छ, बीचमा फाल्न हुँदैन भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा हो । तर, अहिलेको स्थिति आउनुमा विचारभन्दा पदीय लडाइँ मुख्य कारण हो । त्यसैले म कतै लागेको छैन । दुवै पक्षले बोलाउनुहुन्छ, तर म जान्नँ । अझै पनि पार्टी विभाजनलाई रोक्न सकिने ठाउँ छ भनेर लागिरहेको छु ।
कसरी रोक्नुहुन्छ विभाजन ? नेताहरू गालीगलौजमा उत्रिसकेका छन् ।
कार्यकर्ताले चाहे भने अझै पनि पार्टी विभाजन रोक्न सक्छन् । नेताहरूले एकअर्काविरुद्ध गालीगलौज रोक्नुपर्छ । यो बीचमा भएका फरक-फरक निर्णय र कारबाही एकमुष्ट खारेज गर्नुपर्छ । नयाँ तहबाट समझदारी बनाएर पार्टीलाई बचाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र प्रचण्ड-माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तपाईंको पनि हस्ताक्षर छ । अहिले एकता अभियान भनेर कसले पत्याउँछ ?
आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मैले हस्ताक्षर गरेको छैन । अर्कै प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर साथीहरूले दुरुपयोग गरेछन् । त्यसमा मेरो पूर्ण असहमति छ । पार्टी विवादपछि दुवै पक्षले राखेका बैठक, भेला वा सम्मेलनमा म गएको छैन । त्यहाँ पनि कुनै हस्ताक्षर भएको छ भने त्यो मेरो होइन ।
शीर्ष नेताहरूसँग यसबारे छलफल भएको छ ?
मैले दुवै पक्षका नेतालाई भेटेर कुरा राखेको छु । प्रचण्डले भेट्ने समय मिलाउनु भएन । प्रधानमन्त्री केपी ओली, माधव नेपालसहित नेताहरूलाई भेटेर एकता जोगाउन आग्रह गरेँ । उहाँहरू दुवैले कोसिस गर्नुुस् भन्नुभएको छ । मैले नयाँ शिराबाट एकता गर्न अभियान चलाएको छु । तत्कालै रिजल्ट नदेखिएला तर मैले हार खाएको छैन । भोलि मिल्नैपर्छ, त्यसैले चर्को आरोप–प्रत्यारोप नगर्नुस् । सम्हालिनुस् भनेको छु ।
वामदेवको फरक कुरा हो । पार्टीमा रडाको निकाल्ने नै उहाँ हो । चुनाव हारेर आउने अनि कहिले प्रधानमन्त्री चाहियो भन्या छ, कहिले अध्यक्ष चाहियो भन्या छ । अहिले पनि जसले अध्यक्ष दिन्छ उतैतिर जान्छु भनिरहनु भएको छ ।
उसो भए तपाईं उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको एकता अभियानमा हो ?
होइन । वामदेवको फरक कुरा हो । पार्टीमा रडाको निकाल्ने नै उहाँ हो । चुनाव हारेर आउने अनि कहिले प्रधानमन्त्री चाहियो भन्या छ, कहिले अध्यक्ष चाहियो भन्या छ । अहिले पनि जसले अध्यक्ष दिन्छ उतैतिर जान्छु भनिरहनुभएको छ । त्यो अराजनीतिक कुरा हो ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको त मान्नुहुन्छ नि !
मैले संसद विघटनलाई संविधानविपरीत भनेको छु । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले थप प्रष्ट पार्ला । तर, पार्टी विभाजन यसले मात्र भएको होइन । गत वैशाखदेखि भित्रभित्र अनेक खेल भइरहेका थिए । भदौ २६ मा सहमति भयो । त्यो पालना नगरेर दुवै पक्ष विवाद झिक्न थाले । हामीले मिलाउने अनेक कोसिस गर्‍यौं । तर, नेताका स्वार्थले पार्टी संकटमा पर्दै गयो । एउटा नेतालाई मात्र दोष थोपरेर अरू उम्किन मिल्दैन ।
देशभर आ-आफ्ना कमिटी बनिसके । तपाईं अझै पनि एकता हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न बाँकी नै छ । निर्वाचन आयोगले वैधानिकता र चुनाव चिन्ह टुंग्याइसकेको छैन । त्यसैले यो नेकपाका लागि संक्रमणकालीन स्थिति हो । संसद पुनर्स्थापना भए पार्टी फुट्नै नमिल्ने स्थिति बन्न पनि सक्छ । ल चुनाव हुने नै भो रे, जित्नका लागि भए पनि एक हुनुको विकल्प रहन्न ।
अब कता लाग्ने भनेर तपाईंले पनि सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खेको हो ?
पार्टी एकता जोगाउन सकिएन र औपचारिक रूपमा फुट्यो भने त राजनीति गर्ने मान्छे कतै न कतै उभिनै पर्छ । तर, एकता जोगाउन अन्तिम बेलासम्म म कोशिश गर्छु । किनभने, जसरी पार्टी विभाजन हुन लागेको छ यो मलाई मन परेको छैन । विचार नमिले पो पार्टी फुट्ने । पदको लडाइँमा पार्टी फुट्यो भने हामीले लाज मान्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, १५:०७:००
हिंसामुक्त समाज बनाउन विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ : राष्ट्रपति3min read
ईएचएलमा जोडियो गेट कलेज, विद्यार्थीले पाउनेछन् यस्ता सुविधा4min read